जोलीएलएलबी–२, ‘सटायर कोर्टरुम ड्रामा’ « Postpati – News For All
जोलीएलएलबी–२, ‘सटायर कोर्टरुम ड्रामा’
काठमाडौं । आफ्नो भूमिकामा अक्षय कुमार अलिकति पनि दायाँबायाँ गर्दैनन् र सम्झौता त गर्दैगर्दैनन् । उनका फ्यानलाई यो कुरो मजाले थाहा छ । जोलीएलएलबी–२ को कथा र पात्रलाई उनले न्याय गरेकै हुनुपर्छ । यस अघि चलचित्रको ट्रेलरमा समेत उनको प्रस्तुति देखिसकिएको छ । अब भने चलचित्र सिनेमा घरसम्म पुगेर हेर्ने पालो आएको छ । भाष्कर अनलाइनले चलचित्र कस्तो बन्यो ? यसको कथा, निर्देशन, अभिनय, संगीतका आधारमा विश्लेषण गरेको छ । हेरौँ यो रिभ्यूः यस्तो छ चलचित्र ‘जोली एलएलबी–२’
जनरः सटायर कोर्टरुम ड्रामा
प्लटः निर्देशक सुभाष कपुर सामाजिक मुद्दालाई रमाइलो तरिकाले पर्दामा उतार्दैछन् ।
स्टारकास्टः अक्षय कुमार, हुमा कुरैशी, सौरभ सुक्ला, अन्नु कपुर, सयानी गुप्ता
निर्माताः फक्स स्टार स्टुडियो
संगीतः मुन्ज मुसिक, मित ब्रदर्स, चिरन्तन भट्ट
लखनउ निवासी जगदीश्वर मिश्रा उर्फ जोली (अक्षय कुमार) एक वकिलका लागि काम गर्छन् । कोर्टमा उनी आफैँको चेम्बर भए होस् भन्ने चाहान्छन् । उनकी श्रीमती पुष्पा पान्डे (हुमा कुरैशी) र, छोरासँग सुखी जिन्दगी बिताइरहेका छन् । हाँसीखुसी जिन्दगीमा हिना सिद्दीकी (सयानी गुप्ता) को इन्ट्री हुन्छ । जसको श्रीमान्को इन्काउन्टर प्रहरीले गर्छ । हिनाका वकिल भएका जोली यो फर्जी इन्काउन्टरको मुद्दा लड्न तयार हुन्छन् । कानुनका विरुद्ध के उनी साँच्चै यसलाई प्रमाणित गर्न सफल हुन्छन् ? के उनी हिनालाई न्याय दिलाउन सक्छन् ? यो जान्नका लागि भने तपाईँले चलचित्र हेर्नुपर्छ ।
सुभाष कपुरको निर्देशनलाई प्रशंसा गर्नै पर्ने हुन्छ । उनले लखनउ र बनारसको वास्तविक परिवेशमा चलचित्रको छायांकन गरेका छन् । चलचित्रमा कमेडी र गम्भीर मुद्दा बराबर प्रस्तुत गरिएको छ । यी दुई जनराको तालमेल राम्रोसँग गरिएको भन्न सकिन्छ । चलचित्रको विशेषता यसको डाइलग हो । कथा तपाईँलाई वास्तविक र रमाइलो लाग्छ।
अक्षय कुमारको प्रशंसा अवश्य नै गर्नुपर्छ । जसले लखनउको चलनचल्तीलाई चलचित्रमा शानदार तरिकाले प्रस्तुत गरेका छन् । अक्षयको लखनउवाला चरित्र र वकिलवाला भूमिका राम्रो लाग्छ । आफ्नो कमेडी र गम्भीरताबाट अक्षयले तपाईँलाई प्रभावित तुल्याउँछन् । जोलीकी श्रीमती बनेकी हुमा कुरैशी, न्यायधीश सुन्दरलाल त्रिपाठी बनेका सौरभ शुक्लादेखि अनु कपुर, सयानी गुप्ता सबै स्टारले आफ्नो भूमिका गज्जबले निर्वाह गरेका छन् ।
चलचित्रमा जम्मा चार गीत छन् । यी गीत कथासँग मेल खाने पनि छन् । कुनै पनि गीतलाई चलचित्रमा जबरजस्ती राखिएको छैन ।
हेर्ने या नहेर्ने
अक्षयको अभिनय, सामाजिक मुद्दामा आधारित यसको कथा निसन्देह तपाईँ हेर्नसक्नुहुन्छ । अरशद वारसी अभिनित ‘जोली एलएलबी’ जस्तै यो चलचित्र पनि तपाईँलाई राम्रो लाग्छ ।
१० माघ २०७१, शनिबार को दिन प्रकाशित